Kombiyuutaro iyo cajaladaha adag dibadda ma yihiin meelaha lagu kalsoonaan karo in ay gurmad xogta aad. Waxay shil yaabaa, musuqmaasuq aad u hesho ama xataa tirto faylasha aad inta badan. Meesha ugu kalsoonaan karo in ay gurmad xogta aad waa "Cloud". Cloud gurmad, sidoo kale loo yaqaan gurmad online waa hab lagu kaydiyo ama taageero ilaa xogta online on server meel. Sida gurmad caadiga ah, waxaad heli kartaa helitaanka faylasha aad markasta oo aad rabto laakiin aad u baahan tahay si ay u helaan internet.
3. Sugar nidaameed
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah 'Cloud' ama adeegyada gurmad online kuu ogolaanaysa inaad dib ilaa xogta aad ay server. Adeegyada sida caadiga ah siiyaan dadka isticmaala oo tirada kaydinta qaarkood lacag la'aan ah oo marka la daalay, ay u baahan doontaa inaad bixiso kaydinta dheeraadka ah ee ku salysan bishiiba ama sanadkiiba mar. Sidaas darteed waa sida aad shaqaaleysato kaydinta in gurmad xogta ama sida kaydinta bakhaarka caadiga ah. Inta ay kaydinta aad isticmaasho ay ku xiran tahay baahidaada, haddii aad tahay nooca in taageeray ilaa wax kasta, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho meel bannaan weyn. Haddii aad u baahan tahay oo kaliya kaydinta in uu kaydiyo xogta yar, markaas xitaa qorshaha lacag la'aan ah ku filnaan doonto aad u.
Adeegyadan badanaa leeyihiin Chine ee telefoonada, computer, kiniiniyada iwm iyo dadka isticmaala helitaanka faylasha ay wax ka mid ah qalabka ku yeelan karaan. Waxay sidoo kale waafajinta karo files ay si fudud u helaan on dhammaan qalabka ay waqti kasta.
Hoos siiyo waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 5 qalab gurmad ay u hadhaysaa.
WordPress ayaa la sheegay in mid ka mid ah ugu wanaagsan ee daruur Android gurmad app. Waxay ku siisaa 2 GB oo ah meel lagu kaydiyo oo lacag la'aan ah si ay u bilaabaan, laakiin laga yaabaa in la casriyeeyay ilaa 16 GB siyaabo badan oo fudud. Waa dareen la toos ah gurmad sifo oo wax yaabahan fiican ee kuwa doonaya in ay gurmad sawirrada, cajaladaha iyo macluumaad kale oo si toos ah u si fudud u helaan ka dib. Waxa ay taageertaa dhufto ee kala duwan ee ka Windows, Mac, Linux, iPad, iPhone, Android iyo Blackberry. WordPress wuxuu leeyahay adeega caymiska loo yaqaan DropBox Pro. Pro waa kuwa u baahan kaydinta weyn. Waxay bixisaa users illaa 1 TB ee meel online.
• files howlan yahay fudud u dhexeeya qalabka aad.
• DropBox taageertaa kala duwan dhufto ee mobile iyo nidaamyada hawlgalka la heli karo.
• Users ma wax laga walwalo servers sababtoo ah waxa ay mar walba yihiin online. Ka maqnaa No.
• The app WordPress waa fududahay in la rakibo.
• Users helitaanka faylasha tirtiray la qoraalkii hore ee WordPress yeelan karaan.
• Mararka qaarkood files helo adkaan kartaa samaynta files ee ay adag tahay in la helo.
Nuqul sidoo kale waa adeeg daruur ku siinaya dadka isticmaala awood u leh inay geliyaan iyo waafajinta files guud ahaan qalabka aan xad lahayn. Waa muhiim u ah labada isticmaalka gaarka ah iyo ganacsiga. Waxay leedahay madal kooxda halkaas oo ilaa 5 users helaan si ay u wadaagaan files yeelan karaan a. Waxay leedahay hab gaar ah oo la wadaago fayl, sida in aad dillaaci kara meel bannaan oo dadka aad la wadaagto gal ah la. Qaar ka mid ah astaamaha u xiiso badan dhawaan ku daray in ay Copy waa taageero Chromecast, si aad u sii qulquli karaan music, sawiro iyo sidoo kale videos ka qalab si toos ah aad TV fudud ee xunbo icon Chromecast ee Copy.
• Times ayaa premium waa raqiis ah marka la barbar dhigo daruur oo kale dib adeegyada.
• Si fudud waafajinta files dhexeeya deices oo dhan.
• Waxa kale oo ay taageertaa kala duwan dhufto iyo nidaamyada hawlgalka.
• app waxay sidoo kale waa wax fudud oo fudud si loo soo dajiyo.
• ma dhammaan Uploads file dhawaan Waxaad ka arki kartaa qalab aad u Koobiyee hal meel.
SugarSync waa online gurmad xogta madal in, sida adeegyada gurmad ugu waxtar badan in ay yihiin daruur, siinaysaa gacanta ku sida aad u badbaadiyo files digital online. Waxaa kale oo faa'iido leh ee automating shaqada si fiican u la xidhiidha ilaalinta online macluumaadkaaga joogo mar walba. Haddii aad rabto in aad u xamili naftaada ama aad u baahan tahay si ay u sii haystaan ​​aad gurmad on autopilot, SugarSync ka dhigaysa mid u fudud in ay tan u sameeyaan. SugarSync waa mid ka mid ah adeegyada gurmad yar ma bixiyaan meel aan xad lahayn. Waxaad kala dooran kartaa in ay kala doortaan saddex qorshaha, mid kasta oo ka mid ah qorshaha uu leeyahay xad kaydinta ah. Si aad u hesho kaydinta ka badan, aad leedahay si ay kor xisaabtaada.
• SugarSync kale oo uu leeyahay app ah oo ay taageerto macruufka iyo qalabka Android.
• Waxaa kale oo ay leedahay raad raac ah ama syncing muuqaalada si toos ah sida adeegyada kale oo badan.
• Sidoo kale waa fududahay in la rakibo iyo sida loo isticmaalo
• Users ka heli kartaa oo kaliya 500 oo GB ee kaydinta.
Google Drive waa mid ka mid ah adeegyada gurmad daruur ugu kalsoonaan karo oo dabacsan badan wax soo saarka. Waa lacag la'aan ah oo aad ku yeelan kartaa dhammaan faylasha aad ku kaydsan online adigoo isticmaalaya aad casriga ah, kiniiniga iyo kombiyuutarada. Iyadoo Google Drive, waxaad marin u leedahay in aad videos, music, sawiro, waraaqaha iwm in lagu xoojiyaa si nabad ah ku yeelan kartaa. Waxa kale oo aad ugu yeeri kartaa dadka kale si aad u eegto, xaalkaa ama ka tago comments on ka mid ah faylasha aad.
• Mid ka mid ah jaban adeegyada gurmad daruur.
• 15 qorshe oo lacag la'aan ah GB dadka isticmaala.
• hab gaar ah si ay ula wadaagaan files u dhaxeeya saaxiibada.
• Aad u yar macluumaadka laga heli karaa internetka isticmaala cusub si ay u bartaan sida loo isticmaalo Google Drive.
• Users ma ku dari kartaa sirta ah si ay files.
OneDrive waa adeeg kaydinta daruur by Microsoft. Sida adeegyada kale ee lagu kaydiyo daruur, waxay u saamaxdaa gurmad xogta oo uu leeyahay app casriga ah iyo kombuyuutarrada labadaba. Ma aha ugu dambeeyay ee badan, laakiin waxa uu ahaa arrin adeeg la isku hallayn karo oo sannado badan hadda.
• Simple iyo fududahay in la isticmaalo.
• Taageerada dhufto ee kala duwan ee mobile iyo computer labadaba.
• slideshow Wanaagsan U soo bandhigidda sawir.
• doorasho kharash yar.
• Ma taageeri geeyo audio iyo video.
• Waxay leedahay feature raadinta ee Chine Android iyo macruufka lahayn.
Top 5 ZIP iyo rar Crackers Password
> Resource > Top List > 5 Tools in kaabta Phone si toos ah Cloud